Ubuso boxande -I-Hairstyle kunye neMigangatho yeenwele zobuso kwaMadoda | Amadoda aQinisekileyo
Unobuso obuxande? Landela le mithetho yokwenza iinwele kunye neenwele zobuso
URyan Gosling 'kwiiGuy ezimbini eziLungileyo'
Iinwele ezifanelekileyo kunye neenwele zobuso zahlukile kumntu ngamnye kuxhomekeke kubume bobuso bakho. Enye yezona zinto zixhaphakileyo yinto ebizwa ngokuba bubuso buxande okanye ubuso obude.
Ukuchonga ngokuchanekileyo ukuba ubuso bakho buyinxalenye yeli qela, uyakufuna itape tape measure, kunye nephepha kunye nepensile ukurekhoda imilinganiselo:
1 Ubulinganisa njani ubuso bakho
2 Izalathi zobuso ezinde
3 Iinwele zeenwele kunye nemigangatho yobuso beenwele
Ubulinganisa njani ubuso bakho
Ubude: Linganisa ukusuka kumgangatho ophakathi wokukhula kweenwele ukuya kwisiseko sesilevu.
Umphambili: Linganisa eyona ndawo ibanzi ebunzi, ndawo ithile phakathi kwamashiya kunye neenwele.
Cheekbones: Linganisa ukusuka kwesinye isidlele ukuya kwesinye. Thatha elona candelo libalaseleyo (elihlala liphantsi kwekona yangaphandle yeliso) ukubhekiswa.
Umhlathi: Amanyathelo asuka ngentla ngentongomane, apho intamo iphela khona kwaye umhlathi uqala, ukuya kwikona yomhlathi, oqhele ukuba ziisentimitha ezimbalwa ezantsi kwendlebe. Ngoku phindaphinda elo nani ngamabini.
Izalathi zobuso ezinde
Ukuba inani lokuqala olifumeneyo, oko kukuthi, elihambelana nobude, likhulu kuneminye imilinganiselo, emva koko uqikelele ngokuchanekileyo, kwaye ubuso bakho buxande. Imilinganiselo yebunzi kunye ne-cheekbones iyafana kakhulu.
Iinwele zeenwele kunye nemigangatho yobuso beenwele
Kuba ubuso sele buphezulu ngokwaneleyo, cinga ukuthintela iinwele eziphakamileyo, ezinje ngepompadour. Izitayile zeenwele ezinee-bangs (zombini i-wavy, ethe tye kwaye imfutshane) inceda ukuhambelana kobuso buxande. Kodwa ukwahlukana okupheleleyo, njengokunxiba kukaRyan Gosling, kunokusebenza nako. Cela ukuba amacala asikwe ngesikere endaweni yokucheba iinwele.
Uhlobo olulungekileyo lweendevu zamadoda anomilo wobuso yindevu emfutshane. Isizathu siyafana nokuba kutheni iipompadours kufuneka zithintelwe. Iisentimitha ezingakumbi sisusa kubude bebuso obupheleleyo, kokukhona siya kufezekisa imvisiswano.
Ukongeza, ungabandisa ubuso bakho ngokwenza isitayile seendevu ngendlela ethile. Ukugcina iinwele zesilevu kufutshane kuneenwele zesidlele ihlala isebenza. Ukucheba okupheleleyo okanye ibhokhwe encinci engenamigca emi nkqo (iincakuba ezingaqhawukiyo, umlebe osezantsi, kunye nesilevu) zezinye iindlela onokucinga ngazo.
Xa sele ndikuthethile konke oku, okona kubalulekileyo kunye nokuphambili kukuba umntu ngamnye uziva ekhululekile ngomfanekiso wakhe nangokuzithemba. Ke, ukuba ngaphandle kolu hlobo lobuso, ujongeka ungcono ngento eyahlukileyo kuyo yonke into echazwe apha ngasentla, siyakukhuthaza ukuba uqhubeke nayo, kuba yeyona nto ibalulekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Unobuso obuxande? Landela le mithetho yokwenza iinwele kunye neenwele zobuso
Kufuneka uze nantoni nebhegi yakho yangasese?
Uyilungisa njani ityesi yakho yokuhamba?